गल्छी-रसुवागढीलाई लकडाउनले रोकिएका छैन : ई. भण्डारी : गल्छी-रसुवागढीलाई लकडाउनले रोकिएका छैन : ई. भण्डारी :
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ११:४६ । रसुवा
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन छन् । १३ महिनादेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अहोरात्र खटिई निर्माणाधीन सडक सम्पन्न गर्ने लक्षकासाथ अगाडि बढिरहेका छन्, इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारी । उनले बन्दाबन्दीको समयमा पनि निर्माण कार्यलाई सुचारु गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भलाई जोडिएर सैलुङअनलाइनका रसुवा संवाददाता सरस्वती न्यौपानेले इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीसँग गरेका कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
अहिलेसम्म योजनाको काम कति प्रतिशत पुरा भयो ?
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकाले यसको निर्माणका लागी राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ । काम सुरु भएदेखि नै विभिन्न आरोहअवरोहका बाबजुत पनि योजनाको पुरानो सम्झौता अनुसार ६२ प्रतिशत काम सकिएको छ । बाँकी काम पनि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वयमा हुन लागेको छ ।
योजनाको काम पुर्ण रुपमा सुचारु गराउन समस्या रहेको छ ?
सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भन्दा महत्व दिएर गेम चन्जर प्रोजेक्टको रुपमा निर्माण सुरु गरेको हुँदा यसको काम सुचारु गर्न निर्देशन भएको छ । तर निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या परिरहेको छ । नुवाकोटमा निर्माणबाट पास लिएर गए पनि रसुवा रोकिनुपरेको अवस्था रहेको छ । योजनालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले पुर्ण रुपमा सहयोग गरेपनि कोरोनाको कारण रसुवा प्रवेशमा कडाई गरिरहेको छ ।
लकडाउनको समयमा समेत योजनाको काम भइरहेको छ ?
लकडाउनको प्रभाव योजनाको काममा परिरहेको छ । लकाडाउनको अवस्थामा पनि केही क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । पुर्णरुपमा सुचारु गर्न भने सकिएको छैन । तैपनि स्थानिय स्रोतसाधनहरुको प्रयोग गरी स्थानीय मजदुर लगाएर काम निरन्तर भइरहेको छ । हाम्रो दुई प्रकारको ठेक्का थियो, एउटा सडक निर्माण र अर्काे पुल निर्माण । पुल निर्माणका लागी ११ वटा ठेक्का भएकोमा अहिले धादिङको महेशखोला, गल्छी कोल्पुखोला, कोल्पुटार, बेत्रावती खोला, त्रिुशली नदीमा नयाँ पुल र चिप्लेटी, मैलुङको ठाडो खोलामा गरी आट ओटा पुल निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको छ । सडकको हकमा विगतमा विद्युत पोल र घर नहटेको कारणले कालो पत्र गर्न बाँकी रहेका ठाउँमा पनि अहिले पोल र घर हटाएर पींच गर्ने क्रम जारी छ । रसुवा सडकमा भने सडक चौडा गर्ने र नाला काट्ने काम स्थानीय मदजुरबाट भइरहेको छ ।
आठ ओटा पुलको मात्रै काम भइरहेको छ, भन्नुभयो । अरु तीन वटा पुलको काम किन रोकियो ?
देवीघाटको तादी खोलामा पुलको जग खन्ने क्रममा एउटा घरलाई प्रभावित पर्ने देखियो । त्यो घर भत्किन सक्ने हुनाले मुआब्जा दिएर काम गर्ने भनियो । मुआब्जामा हामीले निर्धारण गरेको भन्दा घरवालाले बढी दावी गरेर आएपछि समस्या आएको छ । त्रिुशली हाइड्रोपावरको डायमिटर क्रसिङ गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँको दुई वटा पुल बनाउन समस्या परेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागी हामी लागी परिरहेका छौँ ।
सडक विस्तारको क्रममा भिर पहरा काट्ने काम कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
डेढ महिनादेखि कल्चौडीको भीर काट्ने काम दैनिक नौवटा मेसिनले गरिरहेको छ । यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बेत्रावती अगाडी नालाहरुको काम पनि भइरहेको छ । रसुवाको शान्ति बजार अगाडी अलिकति काम बाँकी छ । गल्छीदेखि गंगटेसम्म २३ किलो मिटर सडकमा तिन मिटर चौडाको काम मात्र बाँकी राखेर सडक रङरोगन गर्ने काम असारभित्र भइसक्छ ।
योजनाको म्याद कहिले सम्म र खर्च कति भयो ?
सम्झौता भएको ०७३ साल कार्तिक २२ गते हो । आगामी पुषको १० गतेसम्मको म्याद छ । त्यतिसम्म सकिने सम्भावना भने छैन । मुआब्जाको कारणले गर्दा बट्टार-विदुर-ढुङ्गेमा काम सुरु गर्न सकिएको छैन । ठेकेदारले काम गर्न सकिएन भन्नु भन्दा पनि काम गर्न स्थानीको अवरोधले गर्दा हो । अहिलेसम्म मुआब्जा बाहेक साढे दुुई अर्ब खर्च भइसक्यो । जम्मा साढे नौ अर्बको प्रोजेक्ट हो । छ अर्व मुआब्जा छुट्टै हो ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले योजनाको कामलाई कस्तो असर पारेको छ ?
कोरोना भाइरस आउनु पहिले शतप्रतिशत निर्माणको काम भइरहेको थियो भने अहिले ४० प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ । ६० प्रतिशत काममा समस्या आएको छ । अहिले हामीले स्थानीय मजदुर लगाएर काम गरिरहेको छ । काममा संलग्न बाहिरी जिल्लाका मजदुर लकडाउन सुरु भएसँगै काम रोकिएको थियो । कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण फैलिने डरले बाहिरी जिल्लाको मजदुर ल्याउन पाइएको छैन । लकडाउन सुरु भएपछि एक महिना काम ठप्प नै भयो ।
त्यसोभए निर्माण संलग्न मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गरिएको छ त ?
हामीले निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सचेत गराएका छौँ । मजदुरलाई एक मिटर पर बसेर काम गर्न निर्देशन दिएका छाैं । तर मजदुरले मास्क लगाउन मानेन भनेर ठेकेदारले भनेपछि मजदुरलाई व्यक्तिगत सुरक्षाबारे प्रशिक्षण दिएर मास्क लगाउन भनेको छौँ । स्यानिटाइजर पन्जा बुढ र घ्याट दिएको छ । अहिले निर्माणमा संलग्नहरुले स्वास्थ्य सतर्कता पुर्ण रुपमा अपनाएका छन् । सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्लामा समन्वय गरेर विस्तारै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर काम सुचारु गरेका छौँ ।